PSJTV | मनलागी खर्चन ४५ अर्ब माग
छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयहरुले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन्। १७ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्। यिनै सरकारी निकायमार्फत यस वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट भने निराशाजनक छ रहेको छ।
तीन खर्ब १३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियाजन गरेमध्ये साढे तीन महिनामा सबै सरकारी निकायहरुले २४ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका कान्तिपुरमा खबर छ ।
त्यसको झन्डै दोब्बर बजेट १९ वटा निकायहरुले माग गरेका हुन्। ‘शीर्षक जे भए पनि मन्त्रीहरुले मनलाग्दी खर्च गर्न थप बजेट माग गरेका हुन्,’ पूर्वकार्यवहाक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘नत्र, तीन महिनामै यतिधेरै थप बजेट किन माग गर्नुप¥यो ? वार्षिक कार्यक्रममा समावेश शीर्षकको बजेट खर्च गरे भै गो नि ।’
ओली असफल हुँदा दाहाललाई के फाइदा ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा जनमत संग्रह हुँनै नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको १८ औं वार्षिकोत्सवलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पृथकतावादी समुह ...
काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन अस्पताल भर्ना भएका छन्। बिहीबार एक्कासि अस्वस्थ भएपछि उनलाई थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको हो। डा यादवदेव भट्टको टोलीले उनको उपचार गरिरहेको ...